na admin on 20-04-13
Iyo SINO-COOL kambani yakavambwa muna 2006, isu tinogara tichitenda kuti kungopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mitengo inonzwisisika yekuenda kumberi! Isu zvakare tinotenda vashandi vedu nekushanda kwavo nesimba kuti vawane mhedzisiro yanhasi.
Gore rega rega, isu tinotora chikamu chinopfuura gumi mafiriji ekuratidzira. Izvi ndizvo zvatiri kuratidza kune vese vatengi muChina firiji yakasununguka. Isu tinoratidza kune vatengi pasi rese nevechidiki, uye ine mutoro maitiro timu. Iyo yekuratidzira nzvimbo ine makumi masere emamirimita, zvigadzirwa zvedu zvese zvine stab ...
Isu Sinocool takagadzika muna 2007, uye muna 2017 takapinda muchivakwa chekumahofisi chivakwa icho chine 1200 mativi emamiririri, ndechako cheSINOCOOL chivakwa, isu tinopa kwakanyanya zororo rekushanda nharaunda, uye zvino tine vashandi makumi maviri nevaviri, vese vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu, vanokwanisa kurarama nebasa rakawandisa uye kupa yakanakira servi ...